Prof Jawaari oo sheegay in Doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin – Kalfadhi
Prof Jawaari oo sheegay in Doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa mar kale carabka ku adkeeyay in dalka Soomaaliya aysan ka dhici karin Doorasho Qof iyo Cod ah.
Mudane Jawaari, ayaa hadalkaasi ku sheegay wareysi uu siiyay mid kamid ah Telefeshinada magaalada Mogadishu. Prof-ka ayaa sheegay in marki loo fiiriyo wakhti hadda harsan iyo doorashada aysan is-waafaqi karin.
“Doorasho qof iyo cod ah sideedaba dalkan kama dhici karto, yaan laguugu sheekeynin waxaan Afgaanistan iyo Ciraaq ayey ka dhacday kuligood waa hadal eber ah. Doorashooyinkaasi waxaa ay ahayeen kuwo dadban oo kale. Shacabka Soomaaliyeed waan u sheegeynnaa ama waxaa ay doorashada u dhaceysaa si la yaqaanno oo aan u sameyn jirtay 60-damaadkii laakiin haddii magaca aad sameyso aadna wax kale siiso waa qiyaanno cad”, ayuu yiri Prof Jawaari.
“Haddii dalka uu nabad yahay imisa shaqaalle ayaa loo baahanyahay ayey kula tahay? Haddii 60-kii aan furnay shan kun oo xafiis oo laga codeynaayo, sharciga uu ku leeyahay ugu yaraan 4-qof oo dowladda ka socoto waa in ay joogtaa, markaas waxaa loo baahanayaa shaqaalle badan”.
“Su’aasha dad badan ay isweydiinayaan waxaa ay tahay noocee ayey noqon kartaa doorashada dalka ka dhaceysa, waxaa loo baahanyahay in maskaxda la shiilo. Tusaale haddii waajid uu kursi yaallo oo aan laga codeyn karin waxaa la geynayaa Xudur oo u dhow oo ay isku dabeecad ay yihiin laakiin Qof iyo Cod ma dhihi kartit”.
Dowladda Soomaaliya ayaa wali ku adkeysaneysa in dalka ay ka dhici karto Doorasho Qof iyo Cod ah sanadka soo socda, iyado oo dad badan ay is-weydiinayaa suurta-galnimada Doorashada nocaasi ah iyo Shabaabka oo wali ku xooggan dalka Soomaaliya.
Golaha Shacabka oo maanta u codeynaya hindise-sharciyeedka Maamulka iyo Maareynta Maaliyadda
Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciyadda Sharciga Maareeynta-Maaliyadda-Guud iyo Sharciga Shirkadaha